Ọnọdụ ahịa ahịa site na hel - Tọn Na-eduga, Ma Enweghị Ahịa | Martech Zone
Agbanyeghi inwe ezigbo ndu nke ndu abụrụla ihe dị ukwuu maka azụmaahịa ọ bụla, ọ gaghị ebute nri na efere ahụ. Will ga-enwe obi ụtọ karịa ma ọ bụrụ na azụmaahịa gị laghachi ga-adaba na akụkọ Google Analytics gị dị egwu. N'okwu a, ọ dịkarịa ala akụkụ nke ndị a na-eduga kwesịrị ịbụ ndị ahịa na ndị ahịa. Gịnị ma ọ bụrụ na ị na-enweta tọn ndu, mana enweghị ahịa? Kedu ihe ị na-emeghị nke ọma, gịnịkwa ka ị ga - eme iji mee ka ọnụ ahịa ahịa gị laghachi n'ụzọ ziri ezi ya?
Ọ bụrụ n ’ị na - agbagwoju anya maka ọnọdụ dị otu a, ihe mbụ ị ga - eme bụ ileba anya na webụsaịtị gị na mgbasa ozi ahịa. O nwere ike ịbụ na nke ọ bụla n’ime ha anaghị arụ ọrụ nke ọma iji mee ka ndị ọbịa gị bụrụ ndị na-azụ ahịa. A na-achịkwa mkpọsa gị nke ọma? Kedu maka weebụsaịtị gị? Ka anyị leba ọnọdụ abụọ ahụ anya;
Ihe atụ 1: Mgbasa Ozi Na-adịghị Mma
Iji chọpụta ma nsogbu ahụ ọ nwere ike ịbụ mkpọsa ahịa gị, ị nwere ike ịmalite site na inyocha ya nke ọma. Ọ bụrụ na ị na-agba mgbasa ozi Mgbasa ozi Google, tụlee ile anya na nyocha ajụjụ ọchụchọ gị. Chọghị ihe ọmụma ọkachamara iji nyochaa nke a. Ga-elele anya na okwu dị na mgbasa ozi gị nke ndị ọbịa na-eji achọta saịtị gị. Ha bara uru na ihe ị na-ere?
N’ụzọ bụ isi, ndị na-azụ ahịa pịa okwu ọchụchọ na mgbasa ozi dabara na ihe ha na-achọ. N'okwu a, ọ bụrụ na ị na-ere "akpa aka akpụkpọ anụ ladies", jiri okwu ọchụchọ na mgbanwe SEO dị iche na ngwaahịa gị. Otu okwu na mgbasa ozi gị dịka "akpa akpụkpọ anụ" ma ọ bụ "akpa ụmụ nwanyị" buru oke ibu ma dịkwa ntakịrị iduhie. Ozugbo ịchọtara isiokwu ziri ezi maka mgbasa ozi gị, nwee ya na ngosipụta URL gị maka mgbasa ozi ọ bụla, aha mkpọsa ahụ na nkọwa ahụ. Nsonaazụ ọchụchọ ga-eme ka mkpụrụokwu ahụ nwee obi ike si otú a mee ka ọ pụta ìhè.
Akụkụ ọzọ nke mkpọsa ahụ nke nwere ike iduga na ntụgharị na-adịghị mma bụ ụdị ngwaahịa, ogo onyinye na ọnụahịa ị na-enye. Ọ bụrụ na ị ga-agba mkpọsa maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị, ọ dịkarịa ala mee nyocha gị nke ọma iji mara mkpa ndị ahịa gị na ihe asọmpi gị na-enye. Jide n'aka na ngwaahịa gị nwere isi okwu siri ike nke ị gosipụtara n'ụzọ doro anya na onyinye gị. Ọzọkwa, ka ọnụahịa ahụ bụrụ nke asọmpi dabere na ihe ahịa nwere.
Ihe atụ 2: Ebe nrụọrụ weebụ na-ezughị oke
Ozugbo ị chịrịla ihe mkpọsa ma ọ bụ dozie nsogbu ahụ, onye ga-esote gị nwere ike ịbụ weebụsaịtị. Ikekwe weebụsaịtị gị na-adọrọ adọrọ. Agbanyeghị, kedu etu ọdịda peeji ahụ si dị irè? Kedu maka imewe ya, ọ bụ enyi na enyi? Mgbe ụfọdụ, ị nwere ike iche dị ka onye ahịa wee nyochaa akụkụ ndị a nke saịtị gị site na echiche ha.
Design - Ọ bụrụ na ị na - agba oke okporo ụzọ nke na - eduga n’inwe mgbanwe, ikekwe ndị mmadụ na - abanye na ebe nrụọrụ weebụ gị ma na - awụ akpata oyi n'ahụ. Ha ga-apụ n'ezie! Jụọ onwe gị ma nhazi weebụ gị kwekọrọ na ọnọdụ ndị dị ugbu a na ụlọ ọrụ gị. Taa, teknụzụ na-eto ngwa ngwa, ndị mmadụ na-ahụkarị ihe ndị mara mma. Na nke a, inwe saịtị ntugheriukwu nke na-abụghịkwa mkpanaka mmekọrịta bụ ngụkọta agbanyụ. Kwe ka atụmatụ gị nye echiche ziri ezi banyere azụmahịa gị na ndị ahịa gị ga-anọ ogologo oge.
Kpọtụrụ Nkọwa - Maka ndị ahịa, ọnụnọ nke nkọwa kọntaktị doro anya bụ ihe ịrịba ama na weebụsaịtị ma ọ bụ azụmahịa bụ ezigbo na ntụkwasị obi. Nke a na-eme ka ọ dị mkpa ịgụnye ndị dị otú ahụ na imepụta gị. Gbalisie ike na akara ekwentị gị na ozi ịntanetị ị na-enye nọ na ya. Wayzọ a, ọ bụrụ na ndị ahịa kpọtụrụ gị ị nwere ike ịnweta azịza n’ime oge kwesịrị ekwesị. Shouldkwesịrị ịgụnye adreesị anụ ahụ nke azụmahịa gị.
Ibe akwukwo - Nke a bụ peeji mbụ ndị ọbịa gị ga-abata ozugbo ha pịa mgbasa ozi gị. N’okwu a, gbaa mbọ hụ na ọ dabara na ihe ị na - akpọsa. Ọ bụrụ na ha ahụghị ihe ha tụrụ anya ya, ohere dị na ha ga-ahapụ ihu akwụkwọ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na isiokwu gị bụ "ngwa ọrụ akpaaka email," hapụ ka okwu ndị a duga na ibe na-enye nkọwa gbasara ngwa ọrụ a. Ọzọkwa, dị njikere na peeji nke ọdịda gị na-ebu ngwa ngwa ma nwee ike ịgagharị.
navigation - Kedu ka ọ dịịrị ndị ahịa mfe isife peeji dị iche iche nke weebụsaịtị gị. Ọtụtụ ndị ahịa na-ahapụ ibe ha ozugbo ọ bụrụ na ha achọpụta na ha na-egbusi oge dị ukwuu ịchọta ihe ha na-achọ. N'okwu a, chepụta weebụsaịtị gị ka ibe niile mepee ngwa ngwa. Ọzọkwa, ibe dị mkpa dịka ndị na-egosi ngwaahịa na ọrụ, gbasara azụmaahịa, kọntaktị na ndị ọzọ ga-ahụ ma dị mfe ịnweta.
Kpọọ Iji Mee Ihe - Oku na-aga ime ihe bụ ọnụ ụzọ ámá mmekọrịta ọ bụla ị ga - esoro ndị ahịa ị chọrọ. Nke a na - eme ka ọ dị mkpa iwu CTA doro anya na bọtịnụ a ma ama maka otu. Kwe ka njikọ ndị ahụ nyere gị mee ihe ọzọ ịchọrọ ka ndị ahịa gị bido.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ imeziwanye mkparịta ụka gị, jikwaa aha azụmaahịa gị n'ịntanetị kwa. Nke a bụ n'ihi na ndị ahịa nwere ike ịgụ nyocha ma ọ bụ jiri ọrụ na ngwaahịa gị na ndị ọzọ. Maka ebumnuche a, na-enye ndị na-enye gị ọrụ mgbe niile kama mee ka ndị ahịa gị hapụ nzaghachi na akaebe. Ihe ndị a niile na-eme ka azụmaahịa ịntanetị gị dị ka ihe a pụrụ ịtụkwasị obi ma melite CTR gị.
Tags: ctrinboundinbound marketingmbido peeji nkeedururu eru na-eduganhazi weebụ
Gịnị bụ Webrooming? Kedu ka o si dị iche na ebe a na-egosipụta mma?
Azụmaahịa Azụmaahịa: Igodo 4 maka aga nke Ọma
Dee 27, 2016 na 10: 50 AM
Edemede mara mma Jamil, kpọọ ọtụtụ ihe ị ga-eche.
Ekele si Alicante, Spain.
Jenụwarị 18, 2017 na 8:23 PM
Imirikiti oge, ndị ahịa na-ebu ụzọ eleba anya na nyocha ụlọ ọrụ ma ọ bụ nzaghachi nke ndị ahịa ndị ọzọ tupu ha agaa n'ihu na-enwe nlele ma ọ bụ mmasị iji nyochaa peeji dị iche iche nke weebụsaịtị gị. Ọ dị mkpa ijikwa ma melite oge na-aga ọdịnaya, yana ọdịdị yana ọkachasị mkparịta ụka na njikọ gị na ndị ahịa. Agaghị ewere mkpọsa na ndu na ọ ga - arụpụta ma ọ bụrụ na ị na - eme ihe, mana ị nweghị ezigbo nloghachi azụmaahịa, yabụ ọ dị mkpa ijikwa na ịnwe ha abụọ.